बहुमतबाट निर्णय लिनु पर्ने अवस्थामा बैठक रोकेका हौँ
बहुमतबाट निर्णय लिनु पर्ने अवस्थामा बैठक रोकेका हौँ प्रवक्ता शर्मा
जनतापाटी मंगलबार, पुस १, २०७६ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गएको मंसिर २६ देखि जारी छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठकका लागि ९ वटा छलफलका प्रस्ताव राखिए । छलफलका प्रस्तावको फेहरिस्त कांग्रेसले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ । झट्ट हेर्दा ६ नम्बर बुँदासम्म सर्वपक्षीय वा द्विपक्षीय सहमति अनिवार्य छैन । तर, ७ र ८ नम्बर बुँदाले अहिलेसम्म बैठक लम्बेतान भएको छ । नेताहरु घरि चाक्सीबारी, घरि बोहोराटार घरि कता बैठक बसेका कुराहरु बाहिर आएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक जारी भनिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा इत्तरले बहिस्कार गरेको खबर ठूल–ठूला अक्षरमा आए । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको ७ र ८ नम्बर एजेण्डालाई लिएर ६०–४० को कुरा मात्रै होइन पार्टी सभापति एकैलौटी अघि बढ्न खोजेका कुराहरु चुहिए । हामीले यो पल्टको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक के झगडामै सिमित हुने हो ? भनी पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई साेधेका छौँ ।
५ मिनेट समय दिनुहुन्छ ?
यो पल्ट केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मूल एजेण्डा के हो ?
–९ वटा एजेण्डा छन्, मैले तपाईलाई सबै सुनाएर साध्य लाग्दैन । हाम्रो वेबसाइइटमा छ, हेर्नु होला । (वेबसाइटमा राखिएका ९ बुँदा)
ती मध्ये महत्वपूर्ण भन्या क्या ?
–सबै महत्वपूर्ण हुन् ।
त्यसो भए, अहिले बैठक अड्काइराखेको चाँहि के ले त ?
–बैठक अड्किएको होइन । सहमतिको जतिक पुगिसकेका छौँ । त्यसैले बैठक अड्किएको नभनौँ ।
अम् देखियो,,,,मंसिरमा बसेको बैठक पुसमा आइपुगिसक्यो, सकिने टुंगो छैन.....
–मैले भने नि हामी सहमति नजिक पुगिसकेका छौँ । वुधबार (भोलि) दिउँसो १ बजे बैठक बस्छ । सहमति मै सबै कुरा टुंगिन्छ । बैठक बसिसकेपछि बहुमतीय प्रणालीलाई अंगालेर भएपनि निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसो किन गर्ने भनेर बैठक रोकेका हौँ । अब सहमति कै निर्णय हुन्छ ।
सहमति हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ?
–तपाई विश्वस्त हुनुस्, हुन्छ ।
सहमति हुनेमा ढुक्क हो.......
–हो, शंका नै छैन ।
अनि, अहिले निवास, कोठा–कोठा पुगेर छलफल भइरहेको कुरो चाँहि के हो ?
–छलफल कहाँ भए भन्ने कुरालाई छोडेर भन्ने हो भने नेताहरुबीच सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको कुरा साँचो हो ।
निवासमा गरिएको बैठकले निकास दिन्छ त ?
–मैले भने त, बैठक कहाँ हुनुपर्दथ्यो । कहाँ भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । एजेण्डा महत्वपूर्ण कुरा हो । जुन एजेण्डामा सहमति चाहिन्थ्यो । त्यसमा प्रगति भएको छ । अघि पनि मैले भने सहमति नजिक पुगिएको छ । ......(म बाटोमा हिँड्दै छु, बाटैमा पूरै अन्तर्वार्ता भ्याउने कुरा नगरौँ न कृपया ) यत्ति नसकिँदै शर्माले फोन काटे ।
सुडान संकटः सेनालाई कु गर्न दुरुत्साहन गर्दै हजारौं मानिस सडकमा १८ मिनेट पहिले
मेलम्ची इन्द्रावती सडक पुनः अवरुद्ध २६ मिनेट पहिले
ब्राजिलका राष्ट्रपतिविरुद्ध आपराधिक मुद्दा चलाउने तयारी ४८ मिनेट पहिले
विश्वका ५२ शक्तिपीठमध्ये छिन्नमस्ता पनि एक हो : पिठाधीश महाकान्त ठाकुर
मुख्यमन्त्री हुन्छु, प्रदेशको नाम दिन्छु -राजेन्द्र राई
हलका सिट आधा खाली राखेर फिल्म देखाउन सकिँदैन -आकाश अधिकारी
मदन पुरस्कार विजेता इङ्नाम भन्छन्- पृथ्वीनारायण र प्रताप शाह कालगतिले मरेकोमा शंका छ
निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा समस्याः जिसस प्रमुख कटुवाल
‘सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म टिक्दैन’ - डा. बाबुराम भट्टराई